बैैशाख २६, काठमाण्डौ । टेकुस्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा यतिखेर कोरोना भाइरस बिरामीको भीड लागेको छ । कुल ३३ शय्या आईसीयूमध्ये १४ शय्या भेन्टिलेटर रहेको यो अस्पतालमा कुनै समय पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली हुँदैन । अस्पतालका निर्देशक डा। सागर राजभण्डारीले टेकु अस्पतालको अवस्था जटिल हुँदै गएको जानकारी दिए । उनले भने, “अब त अक्सिजनसमेत अभाव हुन थालेको छ, यही अवस्था रहिरह्यो भने अक्सिजन नपाएर सङ्क्रमितको मृत्यु हुन सक्छ ।” बिरामीलाई निरन्तर अक्सिजन दिनुपर्ने भएकाले अहिले अक्सिजन अभाव भएको उनले बताए । “एक सङ्क्रमितलाई दैनिक १० देखि…
काठमाडौं । नयाँ अनुसन्धानले कोरोना संक्रमण हावाको माध्यमबाट समेत सर्नसक्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ । कोरोना भाइरस थुकको छिटाहरूबाट मात्र नभएर हावामा रहेको मसिना कणहरूबाट पनि सर्ने देखिएको छ । संक्रमित बसेको कोठामा रहेको हावाबाट लिएको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो तथ्यको पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा उल्लेख छ । विश्वप्रसिद्ध जर्नल द ल्यान्सेटमा प्रकाशित वैज्ञानिकहरूको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना भाइरस हावामा पनि निश्चित समय जीवित रहन सक्छ । त्यसैले भेन्टिलेसन राम्रो नभएको बन्द कोठामा कोरोनाको संक्रमण तीव्र हुने जोखिम रहेको बिज्ञ बताउछन् । आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्दा…
२५ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिस विना कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन नदिन अक्सिजन उद्योगहरुलाई परिपत्र गरेको छ । निजी अस्पतालहरुले भने अक्सिजनको सपोर्टमा उपचाररत कोरोना संक्रमित विरामीहरु जोखिममा पर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी)ले शनिबार मात्र १० वटा अक्सिजन उद्योगलाई परिपत्र गर्दै अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र अक्सिजन दिन भनेको छ । धेरै कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेको सन्दर्भमा विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको एईओसीको पत्रमा उल्लेख छ । न्त्रालयको निर्देशनपछि अक्सिजन सप्लायर्सहरुले सिफारिस लिएर आउनु…
संक्रमित भएर होम आइसोलेशनमा बस्दा अपनाउनुस् यस्ता उपाय
May 1, 2021 May 1, 2021 Nepal E News
काठमाडौं । पछिल्लो समय दिनानुदिन ३० भन्दा बढीको मृत्यु र पाँच हजारको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यहि अनुपातमा संक्रमित थपिदै गए यहाँका स्वस्थ्य संस्थाले विरामीको चापलाई थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । महामारी फैलिदै गर्दा जनस्वास्थ्यविद्हरुले कोरोना भाइरसका विषयमा दिएको सुझावलाई पालना गर्न जरुरी छ । छरछिमेक घर परिवारको चासो राख्ने धेरै भएपनि संक्रमणको जोखिम लिएर काम गर्न निषेधाज्ञा र अन्य सीमितताका कारण कसैलाई पनि सहज छैन । यस परिस्थितिमा कतिपय मानिसले होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाएको पनि देखिन्छ । धेरैले यसरी आफूलाई ठीक भएको अनुभव समेत सार्वजनिक…
कोरोना संक्रमित को पिडा न बेड पाइन्छ, न एम्बुलेन्स
April 26, 2021 April 26, 2021 Nepal E News
आइतबार अपराह्न साढे ३ बजेतिर बिरामीको मृत्युको खबर थाहा पाएपछि टेकु अस्पताल परिसरमा आफन्तको रुवाबासी चलेको थियो । त्यही बेला भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बूढानीलकण्ठका ५४ वर्षीय पुरुषका आफन्त भने भगवान् पुकारिरहेका थिए । काठमाडौँ — भक्तपुरका ३३ वर्षीय युवकको मृत्यु भएपछि टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आइतबार बिहान एकाएक सन्नाटा छायो । कोरोनाले युवाकै ज्यान लिएकामा अस्पतालका चिकित्सक र व्यवस्थापकसमेत दुःखी भए । ‘यति कम उमेरका युवकले समेत कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेपछि हामी साह्रै चिन्तित छौं,’ अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले भने । यही अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत सुन्दरीजलका ४३ वर्षीय पुरुषको…
April 24, 2021 April 24, 2021 Nepal E News
बाँके । बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण बितेको २४ घण्टामा सात बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । आज बिहानै नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत एक सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० निवासी ६१ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि वैशाख ८ गते भेरी अस्पतालको कोभिड आइसोलेसनमा भर्ना हुनुभएका उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि शनिबारअर्थात् आज बिहान १ः२१ बजे मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्रोत व्यक्ति तेज वलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, बितेको २४ घण्टामा बाँकेमा उपचाररत सात जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ…
जीवनशैली, समाचारLeaveacomment
११ वैशाख, बुटवल । पछिल्लो २४ घण्टामा बाँके र रुपन्देहीमा गरी पाँच जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बाँकेका चारजना र रुपन्देहीका एकजना हुन् । भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचाररत दुई महिला र दुई पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार नेपालगन्ज–२ की ७५ वर्षीया महिलाको शुक्रबार साँझ ६:१५ बजे मृत्यु भएको हो । यस्तै नेपालगन्ज–५ का ८६ वर्षीय पुरुषको साँझ ७ बजे र नेपालगन्ज त्रिभुवन चोक ठेगाना भएका ३५ वर्षीय पुरुषको गएराति ९:२३ बजे मृत्यु भएको हो ।…
संक्रमितसँगै सुत्‍न बाध्य छन् कुरुवा
‘अस्पतालमा न सेनिटाइजर छ न त मास्क’, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले पनि भर्ना पाएनन् चिकित्सक भन्छन्– ‘मूकदर्शक भएर बस्नुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’ नेपालगन्ज — दुईवटा सर्जिकल मास्कले नेपालगन्जकी गीता चन्दको मुख छोपिएको थियो । उनका रसिला आँखामा भने त्रास र पीडा प्रस्ट झल्किन्थ्यो । भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित श्रीमान्‌को कुरुवा बसेकी उनलाई एकातिर कति बेला आफूलाई पनि संक्रमण हुने हो भन्ने डर छ भने अर्कातिर श्रीमान्को उपचार कहिले हुने हो भन्ने चिन्ता । अस्पतालबाहिर रहेको होटलमा शुक्रबार श्रीमान्का लागि दालको झोल किन्दै गर्दा उनले कान्तिपुरसँग आफूले पाइरहेका हैरानीबारे सुनाइन् । ‘चिसो भुइँमा थुप्रै कोरोना…
काठमाडौँ — पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २ हजार ४४९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको ८ हजार ७९८ पीसीआर परीक्षणबाट शुक्रबार २ हजार ४४९ जना संक्रमित फेला परेको हो । त्यस्तै ८६६ एन्टिजेन परीक्षणबाट ११० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा २ हजार ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ९४ हजार ६०१ पुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ४१० जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै निको हुनेको संख्या…
मुलुकमा कोरोना अनियन्त्रित हुँदैछ । दैनिक हजारबढी संक्रमितको संख्या थपिएसँगै सरकारले समेत केही गतिविधिमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सुरु गरेको छ । संक्रमितको लागि स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभावको विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि अस्पतालको अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ? चिकित्सकहरू गम्भीर समस्या देखिएका बाहेक लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई समेत घरमै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिन्छन् । घरमै बस्दा खाना र सुरक्षाको बारेमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । भिटामिन…